Hävittäkää - Finnisch - Burmesisch Übersetzung und Beispiele
Sie suchten nach: hävittäkää (Finnisch - Burmesisch)
ထိုပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ကို နှင်ထုတ်ရ ကြမည်။ သူတို့ရေးသော အရုပ်၊ သွန်းသော ရုပ်တုဆင်းတု ရှိသမျှတို့ကို ဖျက်ရကြမည်။ သူတို့လုပ်သော ကုန်းရှိသမျှ တို့ကို ဖြိုချရကြမည်။
သူ၏နွားဥသဘရှိသမျှတို့ကို သတ်ကြလော့။ သတ်ရာအရပ်သို့ ဆင်းသွားစေကြလော့။ သူတို့သည် အမင်္ဂလာရှိကြ၏။ အကယ်စင်စစ် သူတို့အချိန်၊ ဆုံးမခြင်းကို ခံရသော အချိန်ရောက်လေပြီ။
hävittäkää perin pohjin kaikki ne paikat, missä karkoittamanne kansat ovat jumaliansa palvelleet, korkeilla vuorilla, kukkuloilla tai viheriäin puiden alla.
သင်တို့ အစိုးရသောလူမျိုးတို့သည် တောင်ကြီး၊ တောင်ငယ်အပေါ်၊ စိမ်းသော သစ်ပင်အောက်၌ မိမိတို့ ဘုရားများကို ဝတ်ပြုရာအရပ် ရှိသမျှတို့ကို ရှင်းရှင်း ဖျက်ဆီးရမည်။
မြို့ရိုးပေါ်သို့တက်၍ ဖျက်ဆီးကြလော့။ ပျက်စီး ခြင်းကို မစဲစေကြနှင့်။ ခြေလက်တို့ကို ပယ်ရှင်းကြလော့။ ထာဝရဘုရားဆိုင်တော်မမူ။
kukistakaa heidän alttarinsa, murskatkaa heidän patsaansa, polttakaa tulessa heidän asera-karsikkonsa ja hakatkaa maahan heidän jumaliensa kuvat, ja hävittäkää heidän nimensä niistä paikoista.
သူတို့ယဇ်ပလ္လင်များကိုလည်း ဖျက်ရမည်။ ရုပ်တု များကို ဖြိုချရမည်။ အာရှရပင်များကို မီးရှို့ရမည်။ ထုလုပ်သော ဘုရားဆင်းတုများကို ခုတ်လှဲရမည်။ ထိုအရပ်၌ ထိုဘုရားတို့၏ နာမကိုပင် ပယ်ရှင်းရမည်။
olkoot ne herran edessä alati, ja hävittäköön hän heidän muistonsa maan päältä.
ထိုဒုစရိုက်အပြစ်သည် ထာဝရဘုရားရှေ့မှာ အစဉ်အမြဲ ထင်ရှား၍၊ မြေကြီးပေါ်မှာ ထိုသူတို့ကို အောက်မေ့စရာ အမှတ်မျှ မရှိစေခြင်းငှါ၊ ပယ်ရှင်းတော်မူ ပါစေ။
ဗာဗုလုန်ရှင်ဘုရင် နေဗုခဒ်နေဇာ လုပ်ကြံသော ကေဒါပြည်နှင့် ဟာဇော်နိုင်ငံတို့ကို ရည်မှတ်၍ ထာဝရ ဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ ထကြလော့။ ကေဒါပြည်သို့ သွား၍၊ အရှေ့မျက်နှာအရပ်သားတို့ကို လုယူကြလော့။
sapnas (Litauisch>Englisch)farbveränderlichen (Deutsch>Englisch)how old are you ane (Englisch>Portugiesisch)poiudeo (Serbisch>Englisch)4600 (Englisch>Schwedisch)پخش فیلم سکسی سوپر خارجی (Französisch>Englisch)omnes unum sint (Latein>Russisch)فیلم سوپر دختر نوجوان 13 سال (Maori>Englisch)convexa tueri (Latein>Englisch)plaque meaning (Englisch>Tagalog)muje ladki hui hai (Hindi>Englisch)finally aaj wo din aa hi gya (Hindi>Englisch)فیلم سکسی ایرانی جدیدسکس (Englisch>Französisch)balitang komersyo (Tagalog>Englisch)הזרעים (Hebräisch>Spanisch)tornarão (Portugiesisch>Russisch)goods lost are valued most (Englisch>Tamilisch)la belle paris (Französisch>Englisch)maleita (Portugiesisch>Italienisch)membentangkan kertas kerja (Malaysisch>Englisch)فیلمهای سکسی سوپر خارجی اصل (Deutsch>Englisch)हिंदी सेक्सी videobf (Hindi>Englisch)dragonfly (Englisch>Französisch)tagalog ng breakaleg (Englisch>Tagalog)